> Resource> iPhone> A Free Way iji weghachite ozi ederede site na iPhone ndabere
Enwere m ike weghachite ehichapụ ozi na iPhone ndabere maka free?
Azịza bụ maa EE. Ị nwere ike ozugbo weghachi ozi ederede si iPhone ndabere site iTunes. Ọ na-adịghị ebo gị ebubo ihe ọ bụla penny. Igbu bụ nzọụkwụ:
• Jikọọ gị iPhone na kọmputa ebe gị iPhone ndabere locates
• Run iTunes, na nri-pịa na iPhone, wee họrọ "Weghachi si ndabere"
• Ị na-ahụ "Akpatre synced" mgbe na aha gị iPhone
• Họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na pịa "Weghachi"
Ugbu a, ozi niile na iPhone ndabere e weghachiri eweghachi gị iPhone. Ndị ọzọ data dị ka kọntaktị, foto, videos na ndị ọzọ na-eweghachi gị iPhone n'otu oge. Ihe dị gị mkpa ịṅa ntị bụ na ihe nile data na gị iPhone ga-anọchi ndị iPhone ndabere mgbe Iweghachi. Ya mere, i kwesịrị ndabere mkpa data tupu ị na-eme nke a.
Selectively naghachi ozi site na iPhone ndabere
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-ẹdude data na gị iPhone na chọrọ naanị ozi site na iPhone ndabere, ọ bụghị dum ndabere, e nwekwara ụzọ ọzọ, ma ọ bụghị a free otu. Mkpa ka ị na-eji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac), nke-enye gị wepụ na ịhụchalụ niile ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, na i nwere ike naghachi ihe ọ bụla ị chọrọ site na ya.
Agbanyeghị, ọ na-enye gị a ikpe version. Gịnị mere enweghị a na-agbalị mbụ?
Mgbe nbudata na na na wụnye usoro ihe omume gị na compute, na-agba ya ozugbo. Adịghị jikọọ gị iPhone na kọmputa mgbe ị na-eme nke a. Wee soro nzọụkwụ n'okpuru wepụ ozi site na iPhone ndabere.
Nzọụkwụ 1. Họrọ gị iPhone ndabere ma wepụ ya
Mgbe ị na-agba ọsọ ahụ omume na kọmputa gị, họrọ mgbake mode nke naputa site na iTunes ndabere File n'elu nke window. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga na-akpaghị aka na-ahụ gị iPhone ndabere faịlụ na kọmputa gị. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa na Malite iṅomi button na-amalite adịrị ya.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake ozi ederede site na iPhone ndabere
Ozugbo Doppler nsọtụ, i nwere ike ịgụ niile data gị iPhone ndabere, dị ka photos, kọntaktị, ozi, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, ndetu, wdg Họrọ menu nke Ozi. Ịnwere ike ihuchalu nkọwa nke ọ bụla ozi eri, gụnyere iMessage ọdịnaya. N'ihi na Mgbakwụnye, ị nwere ike họrọ nhọrọ nke Ozi Mgbakwụnye. Tinye akà rà na ihe ị chọrọ iji naghachi, na-azọpụta ha ka ha na kọmputa gị site na ịpị Naghachi.